Uyenza njani iplastiki kubisi okanye eGalalith - Ikkaro
yokuqalisa >> Iingcaphephe zaseKhaya >> Uyenza njani iplastiki kubisi okanye eGalalith
Este ulingo ilula ngokumangalisayo. Nangona into eyenziweyo ingeyiyo iplastiki, kodwa icasein, iprotein yobisi, kodwa iziphumo zovavanyo zikhangeleka ngathi zenziwe ngeplastiki ;) Kukho abo bayibiza ngokuba yi-Bioplastic.
Njengomdla wokufuna ukwazi, chaza ukuba le nto yayinelungelo elilodwa lomenzi ngo-1898 kwaye emva kweminyaka Coco Chanel Ndingasebenzisa i «ilitye lobisi»Okanye iGalalith yabo Iigugu ezinqabileyo.
Amanye amagama anikwe iGalalith ngala: iGalalite, ilitye lobisi, ilitye lobisi.
1 indebe yobisi
Iispuni ezi-4 zeviniga
Inyathelo ngenyathelo iresiphi
Ngoku kufuneka shushuze ubisi kodwa singaluvumeli ukuba lubile. Nje ukuba kushushu siyigalela kwindebe okanye kwisitya.
Sifaka iviniga kwaye ugxobhoze umzuzu omnye.
Yenziwe !! Sigalela ubisi kwi-colander kwaye sigcina inhlama eyenziwe.
Ngoku ihleli nje ukuyibumba okanye ukuyifaka kwisikhunta kwaye uyiyeke iintsuku ezimbalwa ukuba ipholile.
Kodwa ukumlandela akufezekisi iziphumo ezilungileyo, ubuncinci ayizizo ezo kulindeleke ukuba zifumane iigugu zeCoco Chanel.
Uvavanyo lokuqala lwenza iGalalith
Kudala ndivavanya iresiphi yeGalalith okanye iplastiki yobisi kwaye iziphumo ziye zaphoxa.
Kucacile ukuba ngokulungisa inkqubo kunye nokubetha isitshixo, okanye iqhinga, singafumana iziqwenga ezinomdla, kodwa okomzuzwana khange zibenjalo.
Iresiphi iye yavakaliswa. Ndifudumeze ubisi kwaye ngaphambi kokubilisa ndilufake kwiglasi, ndibeke umbala wokutya kwezinye iimeko emva koko ndabeka iviniga. Amaqhuma enza phantse kwangoko, ii-flocs zisuka kunamathiselo oluku-casein.
Ukuba kufuneka sisebenzise isisefo esiqhelekileyo, into eninzi yokulahla icasein Kungcono ukusebenzisa isihluzo saseTshayina, enye yamalaphu eya kugcina ubungakanani obuninzi kwaye isivumele ukuba sikhuphe amanzi ngcono.
Imibala ngombala wokutya isebenza kakuhle. Ewe, ukushiya ekubumbeni akwanele.
Iziqwenga apho sibeke khona iplastikhi ziphelile ziba brittle. Njengale ikulo mfanekiso.
Kwelinye icala, iziqwenga apho ndisebenzise khona uxinzelelo, iziphumo ziye zaba ngcono kakhulu.
Kwaye ngakumbi esi siqwenga
Ukuhlala okuqinileyo kunye nokukhanya kweplastiki. Emva kweveki isaphuma ngaphandle "ngeoyile" kodwa nangona isinika imvakalelo yokuqina, kunokwenziwa into ngalo mgangatho.
Kwiziqwenga zam ivumba leviniga lihleli, mhlawumbi ngenxa yokuphathwa gadalala, iGalalith imele ukuba ayinavumba
Kuvavanyo lwexesha elizayo
Amanqaku okuphucula kwezi mvavanyo zilandelayo:
ukwahlula amanzi ngcono kwi-casein kunye nokufaka uxinzelelo kweziqwenga.
Zama ukusebenzisa ijusi yelamuni endaweni yeviniga njengoko kuxoxwe ngale nto Iyafundiseka
Sebenzisa i-formaldehyde ukugqiba le nxalenye kwaye ubone okwenzekayo
Icasein ayinyibiliki emanzini nakwiasidi, nangona ukudibana nayo okanye ialkalis kunokubangela ukuqhekeka. Ayinaphunga, inokuboliswa ziintsholongwane, ayinayo i-allergenic, i-antistatic, kwaye ayinako ukutsha (iyatsha kancinci kwaye ikhazimle emoyeni, kodwa iyatsha ngokususa umthombo wedangatye. Itsha livumba leenwele ezivuthayo).
Imithombo kunye nezalathiso
IGalalith yesiNgesi iWikipedia
Ilitye lobisi lwejele
Izimvo eziyi-18 ku "Uyenza njani iplastiki kubisi okanye eGalalith"
NgoNovemba 7, 2010 nge-7: 34 pm
Akukho nto isilelayo, ukongeza ekwaphuleni, kuyabola. Akubonakali ngathi yiplastiki elungileyo kum, inene.
EyoMqungu 2, 2011 e 5:35 pm
Molo ulungile, bendifuna ukukuxelela ukuba ndisandula ukwenza uvavanyo endingekabinazo iziphumo, kodwa xa ndinazo ndiza kuphinda ndikubhalele, ngeli xesha kukuxelela ukuba eli linge liyavela kwiincwadi ezininzi zesiNgesi , NgeSpanish ndafumana iposti njengoko ilapha. Kwiinguqulelo endizibonileyo, bayalufudumeza ubisi (ngaphandle kokubilisa) bayajikeleza bajikeleze, kukho abo bongeza iviniga kancinci kancinci kwaye bayenza ibe nye, inyani kukuba ubisi "luyasikwa" luyila amaqhuma, ezi kufuneka zinyanzelise, KODWA kungcono ukusebenzisa ilaphu okanye icebo lokucoca ulwelo ukususa ulwelo oluninzi kangangoko kunokwenzeka, yenza imilo ngentlama (casein) esele kwisihluzi (ngesandla okanye ngesikhunta) kwaye ishiye kwindawo efudumeleyo. , Kukho abo bayishiya kwiradiyetha, andazi ukuba ukubhaka kuyakusebenza @ _ @ Ngemibala KUCELWA ukuba kusetyenziswe isalphate yesodium, isodiyam hayidroksayidi, njl (nantsi i-doc, kodwa ikwiNgesi): http://facstaff.bloomu.edu/mpugh/Experiment%2011.pdf (Umguquli kaGoogle?) kunye nevidiyo enokuthi icacise ubuncinci: http://www.metacafe.com/watch/310971/how_to_make_plastic_at_home_from_milk/ Ndiyathemba ukuba ndiye ndanceda, kuba ndiyabona ukuba kukho amathandabuzo amaninzi kwaye ndicela uxolo ukuba akunjalo. Umbuliso omnandi.
EyoMqungu 13, 2011 ngo-3: 02 am
Ewe, iyacaphukisa into yokubona ifoto yeentetho zeGalalith kwaye ungayifumani. Khange ndibenawo umonde wokuvumela "iplastikhi" ukuba icwangciselwe iiveki ezimbini, ndiyishiye kangangeentsuku ezintathu, kuyimfuneko ukucacisa ukuba isikhunta endisenzileyo sasityebile (malunga ne-2cm) xa ndidiniwe ndasibhaka kumaqondo obushushu asezantsi, ixesha elifutshane kunye nokuphazamisa inkqubo, ngokungathi bubushushu bendalo okanye irediyetha, kodwa isiphumo ... ikuki engaqhelekanga, njengoko kunjalo, kunye neebhabhu zangaphakathi zomoya ezifakiwe, ijongeka ngathi yiplastikhi naphina kwaye iyacaphukisa into yokuba khange ndifumane datha zixhaphakileyo. Uxolo ngoncedo olungenamsebenzi. Ukubulisa
Isilimela 16, 2011 ngexesha 6:15 am
kulula kakhulu…. Ukuba awufuni ukuba yaphuke, kufuneka uyilinganise i-20kg / cm2 kwaye uyiyeke yomele ixesha elide kangangoko kunokwenzeka
NgoSeptemba 14, 2011 nge-2: 07 am
Ngaba ungasixelela Yintoni efunekayo ukwakha a umzi mveliso omncinci amakhadi IGalalith?
Uyazi ezinye izinto ngaye?
EyoMqungu 26, 2012 ngo-2: 51 am
Ndiyenzile ngeentlobo ezininzi zobisi kwaye eyona isebenze kakhulu kum ibinobisi lwe-soy kwaye kufuneka nabo balinde iintsuku ezi-2 zokuphumla
UJoseph Murillo Corral
NgoNovemba 6, 2020 nge-4: 03 pm
Madoda: Into oyenzileyo iyafana nokwenza itshizi, kuba icasein lelona candelo likhulu lesonka samasi kunye nenqatha lendalo elubisini, ke iyabola kwaye iyabonakala njengeplastiki. Imibuliso kubo bonke.
UJuan Carlos Gonzalez
NgoNovemba 12, 2020 kwi-1: 46 am
Leyo ingcolileyo "CHEESE" ayibeke bhetele kwisonka kwaye ibe nee-onces ezimnandi.
1 Inyathelo ngenyathelo iresiphi
2 Uvavanyo lokuqala lwenza iGalalith
3 Kuvavanyo lwexesha elizayo
4 Iipropathi zecasinin
5 Imithombo kunye nezalathiso